Imfazwe phakathi kwe-US ne-Iran inokuya esidlangalaleni | Ezezimali
Isiganeko esitsha esichaphazelekayo esichaphazela ukulingana kweemarike zemali yimfazwe enokwenzeka phakathi kwe-US ne-Iran. Ngapha koko, iiasethi ezininzi zemali sele zilithathile eli thuba, kokubini ngengqondo enye kunye nenye. Ukuya kwinqanaba lokuba eyona indices yeemarike zentengiso iyachola, nangona ineentloni kakhulu, oku kunokwenzeka kwisakhelo samanye amazwe. Njengomzekelo, kwi Idonga isitalato Ukungavisisani eMiddle East kuyanzima, noDonald Trump ebambe uhlaselo ekujoliswe kulo e-Iran ngomzuzu wokugqibela. Kodwa akuthandabuzeki ukuba ukuhlaselwa okukhethiweyo kwizikhundla zolawulo lwaseTehran kuya kwenzeka kwiintsuku ezizayo.
Kule meko ixhalabisayo kwilizwe liphela, kuyachukumisa ukuba ixabiso leoyile liyaqhubeka ukunyuka, kuba uhlaselo lomkhosi olwenziwa yi-United States ngokuchasene nomthengisi weoyile unokuchaphazela ukuhamba okungafunekiyo eMbindi Mpuma, ongumrhwebi ongaphezulu kwama-20%. yemveliso yehlabathi. Inkqubo ye- Isalathiso Brent eYurophu iqhubele phambili ngepesenti enye kwiimarike zezemali. Kude kube kukujolisa kwixabiso elifikelele kwi-66 yeedola ngomgqomo, ngelixa i-US West Texas ibuye yaya kwi-58 yeedola.
Kodwa enye yezona zinto zixhalabisayo kwicandelo labatyali mali abancinci nabaphakathi yindlela enokwenzeka ngayo imfazwe phakathi kwe-US ne-Iran. Kungenxa yokuba akukho mathandabuzo ukuba kuya kubakho uluhlu lwe abaphumeleleyo naboyisiweyo phakathi kwamaxabiso yomqondiso owahlukileyo. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo kunokukwenza uzuze okanye ulahlekelwe yimali eninzi kwimisebenzi yokuthenga nokuthengisa izabelo kwimarike yemasheya. Ngale ndlela, inokuqwalaselwa njengethuba lokuhlengahlengisa iiphothifoliyo zotyalo-mali kwiinyanga ezizayo. Ngenjongo, kwelinye icala, kukonga kwakho kunenzuzo kwaye kwelinye icala, ukukhusela izikhundla zakho ebusweni bale meko enokwenzeka kubudlelwane bamanye amazwe.
1 Imfazwe phakathi kwe-US ne-Iran
2 Amaxabiso akhuselekileyo kule meko
3 Ukwenza ngcono izitokhwe
Imfazwe phakathi kwe-US ne-Iran
Impendulo yokuqala yeemarike zamasheya zamazwe aphesheya iya kuthi icace gca njengoko kuya kubakho ukuwa okubalulekileyo kwii-indices zesitokhwe eziphambili kwihlabathi liphela. Ngokukodwa, kwizokhuseleko ezinxulumene iibhanki kunye namaqela ezemali ukuba baphulukane nezikhundla ngamandla amakhulu. Kwicandelo elibhaptiziweyo kwindlela ecacileyo yokunyuka phezulu kuwo onke amagama: elifutshane, eliphakathi nelide.
Elinye lamacandelo achatshazelwe yinto yokuba le nyaniso ibalulekileyo inokwenziwa isebenze yile inxulunyaniswa nexabiso lokujikeleza. Banovakalelo kakhulu ekuweni kwamaxabiso abo ngenxa yezi ziganeko. Akunanto, ukungazinzi kwayo kubaluleke ngakumbi kunamanye amaxabiso entengiso yemasheya. Umahluko phakathi kwamaxabiso abo aphezulu kunye neyona isezantsi ukuya kuthi ga kwi-6% kwaye nangamandla amakhulu. Kwaye ke amathuba ayo okwehla ngenxa yemfazwe phakathi kwe-US ne-Iran aya kuba maninzi.
Amaxabiso akhuselekileyo kule meko
Ngokuchasene noko, akukho mathandabuzo ukuba kuya kubakho ezinye izinto zexabiso eziyakuxhamla koku imeko entsha kwisicwangciso-qhinga sehlabathi se-geo. Ikhokelwe ngegolide enokunyuka iye kwizikhundla eziphezulu kakhulu kuqwalaselo lwamaxabiso ayo. Kuba sisinyithi esixabisekileyo sokuba kwezi meko sisebenze njengendawo ekhuselekileyo xa kujongano lwamaxesha okungazinzi kwiimarike zezabelo. Apho baninzi abatyali zimali abancinci nabaphakathi abathatha izikhundla kule mali ibalulekileyo. Ukukhusela izikhundla zakho ngaphezulu kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwezobuchwephesha kwaye ungathatha ngaphezulu ukusukela ngoku.
Ngelixa kwelinye icala, asinakho ukulibala ukuba isinyithi esimthubi sesinye sezona zinto zishukumayo zezezimali kumaxesha akutshanje. Kuyo yonke imiqathango yokusisigxina, oko kukuthi kunqamleza, okuphakathi kunye nokude kwaye ukuya kwinqanaba lokuba ilungelelanise iprofayile yabo bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngenjongo yokwenza ukonga kunenzuzo ngaphezulu kwezinye izinto zobugcisa. Kunye ephezulu kakhulu enokubakho kwaye iyakwazi ukwanelisa ulindelo lwabo bonke abafake izicelo. Ngenzuzo enokuba phakathi kwe-20% kunye ne-30%.
Ukwenza ngcono izitokhwe
Amaxabiso esitokhwe angenza okona kulungileyo kwisiqendu kwimfazwe enokwenzeka phakathi kwe-US ne-Iran zezo zivela kwicandelo lombane. Ngeenkampani ezidwelisiweyo, ezinje Endesa, Iberdrola okanye Naturgy. Kungenxa yokuba asinakulibala ukuba kuzo zonke iimeko zikwimeko yokunyuka simahla. Oko kukuthi, ngokungaxhathisi ngaphambili kwaye oko kunokukunceda ufezekise amaxabiso aphezulu. Apho banokuphumeza khona iinjongo ezingaphezulu kunezo ziboniswe ngeli xesha. Kwicebo lotyalo-mali ekufuneka lithathelwe ingqalelo njengelondolozayo okanye elikhuselayo.
Enye into ekufuneka uyithathele ingqalelo ukusukela ngoku ukuya phambili kukuba amaxabiso ahambelana nokutya angakwenza kakuhle. Phakathi kwezinye izizathu, kuba azichanekanga kangako kolu tshintsho kulungelelwaniso lwamaxabiso abo kule meko intsha yeqhinga. Kwelinye icala, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba la macandelo anovakalelo olukhulu ekusasazeni izabelo ezinomtsalane kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngenzuzo ephakathi ejikeleze i-5%. Iphezulu kakhulu kunaleyo iveliswe kwiimveliso zebhanki eziphambili, njengakwimeko yedipozithi yexesha elimisiweyo, iiakhawunti zemivuzo ephezulu okanye ityala likarhulumente.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba iibhondi zikazwelonke zinokuchaphazeleka kakubi yile meko intsha, ngokuhla okubonakalayo kwinzuzo yabo. Ukuya kwinqanaba lokuba iqhuba abagcini ngaphandle kwezikhundla zabo kwaye ijolise kwezinye iindawo ezikhuselekileyo ezifanelekileyo. Kwimeko ethathelwa ingqalelo inzima ukwazi ukuba wenzeni ngemali yethu. Kwisigqibo esiza kuzisa iintloko ezininzi kubasebenzisi kuba azininzi iiasethi zemali ekunokukhethwa kuzo ngalo mzuzu, kwisicwangciso-nkqubo sotyalo-mali ekufuneka sithathelwe ingqalelo njengolondolozo okanye okhuselayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Imfazwe phakathi kwe-US ne-Iran inokuya esidlangalaleni